UN: Somalia xaalad ayaa ka jirta
4 Dec 4, 2012 - 10:30:09 AM
Saraakiil Qaramada Midoobay ka tirsan oo Muqdisho kula hadlay saxaafada ayaa sheegay in Xaalad Bani'aadamnimo ay weli ka jirto Somalia, iyagoo sheegay in laga qabo rajo in xaaladu ay iska bedesho sida ay ay hada tahay.
Mas'uuliyiinta UN-ka ayaa waxay dalbadeen lacag gaaraysa $1.3 million si gargaar ay u gaarsiiyaan dad ka badan 3.8 million qof oo Somali ah, kuwaasoo ay xuseen inay u baahan yihiin gargaar aadane.
"Xaalada Aadaminimo ee Somalia weli waa mid khatar ah, waxaana dalbanay lacag gaaraysa $1.3 million si sanadka soo socda aan u caawino in ku dhow kala bar dadka Soomaaliyeed" ayuu yiri Stefano Porretti oo ah madax u ah hadda xafiiska UN ee gargaarka bani'aadanimo ee Somalia.
Sarkaalkan wuxuu sheegay in Xaalada Amni ee Somalia oo isbedel weyn uu ku dhacay iyo mida Siyaasadeed ay sahli karaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka u baahan, taasina ay noqonayso in laga hortago dhibaatooyinkii ay dadku markii hore kasoo barakici jireen.
UN-ka ayaa sanadkii  sheegtay in abaartii ku dhufatay Somalia ay sababtay macluul ay dad badan naftooda ku waayeen, waxaase ay hoos u dhacday macluushaas markii gargaaro aan la filay ay ka yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Iiraan iyo dalalka Carabta qaarkood.
"Xaalada Bani'aadamnimo ee Somalia waa mida ugu adag dunida xiligan, waxaase jira dadaalo la doonayo in hoos loogu dhigo in dad ay guryahooda uga cararaan cuno la'aan" ayuu yiri Porretti.
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Somalia, C/kariin Guuleed ayaa isaguna sheegay in qorshaha cusub ee UN-ka uu yahay mid lagu doonayo in si dhab ah loogu caawiyo dadka Somalida kaddib 20-sano oo ay colaado jireen.
Qoxooti badan oo Somali ah oo ka cararay abaaraha iyo colaadaha ka taagan dalka Somalia gaar ayaan gobolada Koonfurta ku yaala ayaa buuxiyay xeryo ku yaala dalalka Kenya iyo Ethiopia, kuwaasoo lagu sheegay inay yihiin kuwa ugu waaweyn dunida.
Dhagayso: Qaban qaabada xuska kowda August